Alarobia 06 Martsa 2019. – FJKM
Alarobia 06 Martsa 2019.
1 Mpanjaka 8.54-66
Ny famaranana ny fitokanana no hitantsika eto ka nanamarika izany :
1-Ny firavoravoana lehibe . Fiderana an’ Andriamanitra sy fifaliambe no atao 14 andro be izao . Eny! mendrika izany ny Tompo ary rariny raha mifaly ny vahoaka taorian’ny ezaka rehetra namitana ity trano lehibe ity. Faly no ravoravo ny fony noho ny soa rehetra nataon’i Jehovah » (and66)
2-Ny fifamatoram-pisiana amin’ny Tompo . Hoy ny and 57: « Jehovah Andriamanintsika anie no amintsika ? tahaka ny tamin’ny razantsika ? aoka tsy handao na hahafoy antsika izy » .Ary hoy kosa ny setriny eo amin’ny and61 : »Ary aoka ho marina amin’i Jehovah Andriamanintsika anie ny fonareo , handehananareo amin’ny didiny sy hitandremanareo ny lalàny » . Tsy mahazo mandeha ila mantsy ny finoana , fa ny Tompo irina , tsy handao ary ny olona koa manaiky tsy handao , izay vao tafaraka tsara.
3-Ny fitoriana ny Anaran’ny Tompo . Hoy ny and 60 : » mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin’ny tany fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy Izy ».Tsy azontsika adinoina mihitsy izany , ny antom-pisian’ny fiangonana dia ny hanao mpianatra ny firenena rehetra, araka ny baiko navelan’i Jesoa raha hiakatra any an-danitra Izy (Mat 28.19).